Wepamusoro runyorwa rweanoda kuziva zvirongwa iwe aunogona kuisa pane Linux | Linux Vakapindwa muropa
Dzimwe nguva kubhurawuza Google uye kutsvaga software yeLinux kana kushandisa iyo Ubuntu Software Center yekutsvaga injini, unosangana nemapakeji e curious software yeiyo penguin system. Pasina kuda, iwe unoshamiswa nehuwandu hwe software iyo iwe yausingazive uye pamusoro pezvose, iko kunyorera uko vamwe vangatove nekumwe kushamisika. Neichi chikonzero, ini ndaida kugadzira muunganidzwa wemamwe ma mapurogiramu kuda kuziva kuti vazhinji vandibata.
Subsurface: isoftware maunokwanisa kubata uye kuona data nezve kubhururuka uye kugungwa. Yakanga yakanyorwa naLinus Torvalds pachake, sezvo chimwe chezvinhu zvake zvekuvaraidza chiri kudhizaivha.
QuitCount: chirongwa chakagadzirwa uye chakagadzirirwa kumisa kusvuta. Chirongwa ichi chiri nyore, iwe unogona kupinda zuva raunotanga maitiro uye rinokuudza iwe akateedzana e data ayo achakubatsira iwe kuenderera neiyo detoxification.
Brewtarget: iyo karukureta yedoro ... kureva kuti, chirongwa chinokubatsira kuverenga zvigadzirwa, tembiricha parameter, nezvimwe, pamusoro pekuchengeta dhatabhesi yezvinhu zvekugadzira doro rinonaka.
Apache Ofbiz: Icho chirongwa chinobatanidza yakawanda software yekumisikidza rako bhizinesi, chimwe chinhu senge PrestaShop. Nayo unogona kuve nezvikumbiro zve ERP, CRM, e-commerce, rubatsiro, mapoinzi ekutengesa, nezvimwe.
Stellarium: Iyo ndeimwe yezvangu zvandinoda, sezvandinoshandisa dzimwe nguva. Chokwadi ndechekuti kana iwe uchishuva nzvimbo uye uine teresikopu, nayo unogona kuve neruzivo rwakakura kuti uzive zvaunoona nguva dzose uye kuti hapana chaunorasikirwa.
Inotapira Imba 3D: isoftware yekugadzira yako yega imba mu2D uye 3D, inobatsira zvakanyanya kana uine mapurojekiti mupfungwa yekuti imba yako nyowani ingave sei.
Kutenderera: chirongwa chine mwero chinokutendera iwe kuti uve nekarenda yekudzora kuchenesa kwemadzimai. Mune maitiro eMencal, zvimwe zvakafanana ...
Jkiwi: chikumbiro chinotibvumidza kurodha pikicha uye nekuisa dzakasiyana mhando dzebvudzi uye vhudzi kuti tione kuti chimiro chitsva chingave
Qalculate !: Iyo karukureta iyo, pamusoro pekuita iko kwekutanga mashandiro anoitwa nemamwe macalculator, inogadzirisa equation nemafomura.
TDFSB: iri maneja wefaira iyo inotibvumidza isu kufamba nemafaira edu uye madhairekitori mu3D, sezvavanoita mune iyo bhaisikopo Tron.
Bsdgames: iwo ari nyore mitambo yeiyo system koni.
Gbonds: kuongororwa kwemasheya, kune avo vanoda kuve vanowirirana nezvehupfumi uye musika wekutengesa.
QhaveDate: chirongwa chekuwedzera mikana yekuita bonde, nekuda kwewebhusaiti yekufambidzana.
Xflux: kuitira kuti usakanganisa maziso ako paunopedza maawa pamberi pekombuta yako. Neichi chishandiso unogona kutarisira hutano hwemaziso ako.
Mamwe mashoko - Arduino IDE uye ArduBlock maitiro ekuvaisa pane Linux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Muunganidzwa wezvirongwa zvekuda kuziva zveLinux